England: Yaya Toure oo sanado ka dib ka tagay City, Pep Guardiola oo la yiraahdo TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY »England: Sannad ka dib markii uu ka tagay City, Yaya Toure ayaa ku biiray Pep Guardiola
Currently koox la'aan, laakiin ma rasmi ah ka fariistay, Yaya Toure kharash gareeya inta badan waqtigiisa falanqeeyo kulan ee BBC-da, silsilad uu u shaqeeyo sidii la taliyaha. Sayidka April 6 ah, ka dib guushii ay Manchester City ka dhanka ah Brighton (1-0) ee semi-finalka koobka ugu English League, hore ee Ivory Coast oo caalami ah ay muujiyeen isaga qudhiisu ka buuxa u jecel yahay Pep Guardiola, kaasoo uu kula habase yeeshee haysaa, xiriirka buuqa.
Sidoo kale akhri: Farriinta Noël Dourey ee faragelinta Emma Lohoues
"Waa uu ka duwan yahay. Waa nin aad u qadariya oo jecel shaqadiisa. Waxa uu diiradda saarayaa wax walba oo uu sameeyo waa la diyaariyaa. Mar walba wuxuu hubiyaa inuu ciyaartoydiisa ku kalsoonaado. Waa hogaamiye weyn. Waxa uu ogyahay sida loo diyaariyo ciyaartoydiisa maskax ahaan wuxuuna u qaataa inay siiyaan sida ugu fiican "ayaa Yaya ku yiri Pep.
Sidoo kale akhri: Sawir: Roudé Blaise, sheekada sheekada ee caruurtu waxay u jeesteen Gbizié Léon (aabbaha Serge Aurier)
Labada nin ayaa ku kulmay Barcelona, ​​2008, kahor kulanka Manchester City, sideed sanno ka dib. Markasta oo xiriirkoodu aad u kacsanaa, Guardiola waxaa badanaaba lagu eedeeyay inuu takooray Yaya. Sanadkii la soo dhaafay, dhamaadka qandaraaska "Citizens", ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa la weydiistay inuu xiro boorsadiisa. Waxa uu la saxiixday Olympiakos, ka hor inta uusan qandaraaska u cusbooneysiinin kooxda reer Greek seddex bilood ka dib, islamarkaana uu soo gabagabeynayo koox la'aan.
Cameroon: Warbaxin ka timid saxafiga Noubadoum Sotinan wax ka badan sanado 4 ka dib markii uu waayay